ဆံပင်ဖြူလေးတွေ ပေါ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေရပြီလား?? | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဆံပင်ဖြူလေးတွေ ပေါ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေရပြီလား??
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ အသက်အရွယ်ကြောင့်သာမကပဲ မျိုးရိုးကြောင့် ဆံပင်ဖြူ ပေါက်နေလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ Beauties တို့ အဆင်ပြေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Magic Root Precision Pen လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Precision Pen ဟာ ထသွားထလာ အရေးတကြီး အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ယာယီဖုံးအုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး ဦးရေပြားကို လုံးဝမထိခိုက်စေပါဘူး။ ဒါလေးကိုတော့ LOREAL က ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Pen လေးဟာ ဖြူနေတဲ့ဆံသားအရင်းမှစအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး Pen Type ဖြစ်တာကြောင့် လိုအပ်သလို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆံသားအရောင်အလိုက် Brown ( ညို ) နဲ့ Black ( မဲ ) ဆိုပြီး ၂ ရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အရောင်ကြာရှည်ခံမှုဟာ အသုံးပြုတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့အခါ Pen ရဲ့ အောက်ခြေကို ကိုင်ပြီး လက်ယာရစ်လှည့်ပေးပါ။ အကြိမ်ရေများလာတာနဲ့အမျှ မှင်များ Brush ပေါ်မှာ စိုလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ပြီးနောက်မှာတော့ အသုံးပြုလိုတဲ့ နေရာကို အသာအယာ Brush နဲ့ တို့ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရေပြားမှာ မစွန်းထင်ချင်ရင်တော့ ဆံပင်ခြောက်မှသာ နောက်တနေရာသို့ အသုံးပြုပေးရမှာပါ။ စိတ်တိုင်းကျတဲ့ အရောင်ထိထွက်ဖို့ရန်အတွက် ဆိုရင်တော့ ၁ မိနစ်လောက် အခြောက်ခံပြီးမှ ထပ်ဆိုးလို့ရပါမယ်။
အရွယ်အစားပမာဏက သေးပြီး သယ်ယူရလွယ်ကူတာကြောင့် အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း 11 $ သာကျသင့်ပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်တာကြောင့် အသုံးပြုလိုပါက Scarlett Online Shop မှ မှာယူရရှိနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်နော်။
Tags: Hair Care Accessorieshair color